Amboasary Avaratra – Anjozorobe : nahazo jiro, saingy faran’izay ratsy lalana… | NewsMada
Amboasary Avaratra – Anjozorobe : nahazo jiro, saingy faran’izay ratsy lalana…
Kaominina mpamokatra Amboasary Avaratra, ao amin’ny distrikan’Anjozorobe. Maro ny sakana amin’ny fampandrosoana, toa ny tsy fisian’ny jiro maharitra, lalan-dratsy tsy ivoahan’ny vokatra zary lasa sakana ho an’ny lalam-bokatra, sns.
Niposaka anefa ny masoandro ho an’ity kaominina ambanivohitra ity, satria notokanana ny faran’ny herinandro lasa teo ny toeram-pamokarana herinaratra avy amin’ny tohodrano ao Ambatokelivava. Mamokatra herinaratra mahavita ny kaominina Amboasary Avaratra sy Amparatanjona ity fotodrafitrasa ity, afaka mamatsy tokantrano hatrany amin’ny 500 isa.
“Tombony lehibe ho an’ny mponina, satria hanala vesatra ho azy ireo ary ho fanoitra ho an’ny fampandrosoana ny tontolo ety ambanivohitra ity fotodrafitrasa ity. Tafiditra anatin’ny tetikasa hamatsiana herinaratra amin’ny faritra ambanivohitra ihany koa izany, mba tsy hiankinan’ny fampandrosoana ifotony amin’ny hafa intsony”, hoy ny nambaran-dRakotoarimanana Tantely, tomponan’andraikitry ny tetikasa PHEDER, eo anivon’ny Fondation Tany Meva.
Mahatratra 60 Kw hatreto ny herinaratra vokarin’ity fotodrafitrasa ao Amboasary ity. Kely ihany, kanefa ampy ny mponina ao amin’ireo kaominina roa ireo izany. Antony hamatsian’ny Vondrona eoropeanina vola ny tetikasa rahateo izay famaliana ny hetahetan’ny mponina ambanivohitra amin’ny herinaratra izay.
“Mba andalovy ny lalana…”
Faly ny mponina nahazo herinaratra… Mbola hetahetan’izy ireo voalohany anefa ny fahavitan’ny lalana miainga ao Anjozorobe mihazo an’Amboasary Avaratra sy ireo kaominina manodidina. “Mazava ny tanana, hitondra fampandrosoana ny jiro. Ho feno anefa izany, raha mba misy fanamboarana ny lalana mankaty aminay. Fantatray fa tsy ho vita tsara mihitsy io, saingy raha mba vita ireo mety hampidi-doza ka mampihemotra ny fiara, mba fara faharatsiny misy fisokafana aty”, hoy ny nambaran’ny mponina iray, izay mpamboly sy mpiompy ao Amboasary.
Nahita ny faharatsian’ny lalana, izay mirefy 45 km monja miala eo Anjozorobe, ireo tonga nanatrika ny fitokanana. Naneho ny fitarainany tamin’ny filohan’ny Repoblika, izay tonga nitokana ny fotodrafitrasa ihany ireo olom-boafidy sy solon-tenam-panjakana tany an-toerana. Toa ny mahazatra, nisy ihany ny fampanantenana, saingy toa tsy mahatoky izany intsony ireo mponina. “Raha mba handalovan’ny filoha ny lalana fa tsy mandeha helikoptera izy, tena tsapany ny fahorianay… Mba andalovy na indray mandeha monja aza ny lalana”, hoy ny raiamandreny iray ao Andreba, lalana andalovana raha ho any Amboasary…